बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus ) भनेको के हो ?
गैर कानुनीरुपले कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखेको अवस्थामा बन्दीलाई अदालत समक्ष उपस्थित गर भनी जारी हुने आदेशलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण भनिन्छ । यस अन्तर्गत बन्दीको कसुर वा गल्तीको मूल्याङ्कन नगरी उसको थुना कानुन बमोजिम छ छैन भन्ने मात्र जाँचिन्छ र गैर कानुनी देखिएमा छोड्ने आदेश दिइन्छ । यो रिट निवेदन बन्दीको हकमा अरुले पनि दिन सक्छ र यसमा दस्तुर लाग्दैन ।
2 Career News and Info चैत्र ३१, २०७३
3 नेपाल सरकारले वितरण गर्ने मानपदविहरू
4 Career News and Info चैत्र १०, २०७३
5 Bitcoin भनेको के हो ?
8 विश्वकप फुटवल २०१४ मा वितरित विभिन्न अवार्डहरू
9 आजको खबर – १७३